သတိထားကြပါ ..ကြက်တူရွေး ရေသောက် ဆင်းပြီ…မကြာမှီ ရုတ်တရက် စိုးရိမ် ရေအမှတ် ရောက်လာနိုင်ပါတယ်..ကြိုတင် ပြင်ဆင်ထားကြပါ… – Na Pann San
ကြက်တူရွေး ရေသောက် ဆင်းပြီ။ ဧရာဝတီမြစ်‌ရေ စတက် ပါတယ်…..မြစ်ရေဝင် ဒေသများ သတင်း နားထောင် ပါ…. မကြာမှီ ရုတ်တရက် စိုးရိမ် ရေအမှတ် ရောက်လာနိုင် တယ် ၊ ကြိုတင်ပြင် ဆင်ထားကြပါ….
ကြက်တူရွေး ရေသောက် ဆင်းပြီ
အိန္ဒိယ သမုဒ္ဒရာ တောင်ပိုင်း မှာ မုန်တိုင်း အငယ်စားများ (၂၇) ရက် ဇွန်လ က တကြိမ် ဖြစ်ခဲ့ ပြီး ၁၃ ရက် ဇူလိုင် မှာ တကြိမ် ဖြစ်လာကာ…. မုတ်သုန်‌ရေငွေ့ ထုတ်လုပ် မှုကို အလွန့် အလွန် များစေပါတယ် …. သမရိုးကျ သတိပေးချက်က ဧရာဝတီ မြစ်ရေကို ကြက်တူရွေး ရေသောက်ဆင်းပြီဆိုတော့ ….
မြစ်ရဲ့ Down stream ရေဝင်ရပ်မှာရှိတဲ့ ပြည်သူများအနေနဲ့ အထူးသတိပြုပြီး လုပ်ဆောင်သင့်သည်များ ကြိုတင် ပြင်ဆင်သင့်ပါပြီ…။
ကြက်တူရွေးရေသောက် ဆင်းတယ်ဆိုတာ မြန်မာပြည် ရဲ့ ဒုတိယ မြစ်ကျဉ်း ရွှေကူနဲ့ ကသာကြား မှာရှိတဲ့….
ကြက်တူရွေးနှုတ်သီးပုံစံ ကျောက်အစွန်းကိုကြည့်ပြီး ဒေသခံတွေ မြစ်ရေအတက်ကျ ခန့်မှန်းကြတဲ့နေရာပါ။
ကွကျတူရှေး ရသေောကျ ဆငျးပွီ…မကွာမှီ ရုတျတရကျ စိုးရိမျ ရအေမှတျ ရောကျလာ နိုငျတယျ..ကွိုတငျ ပွငျဆငျထားကွပါ…
ကွကျတူရှေး ရသေောကျ ဆငျးပွီ။ ဧရာဝတီမွဈ‌ရေ စတကျ ပါတယျ…..မွဈရဝေငျ ဒသေမြား သတငျး နားထောငျ ပါ…. မကွာမှီ ရုတျတရကျ စိုးရိမျ ရအေမှတျ ရောကျလာနိုငျတယျ / ကွိုတငျပွငျဆငျထားကွပါ….
အိန်ဒိယ သမုဒ်ဒရာ တောငျပိုငျး မှာ မုနျတိုငျး အငယျစားမြား (၂၇) ရကျ ဇှနျလ က တကွိမျ ဖွဈခဲ့ ပွီး ၁၃ ရကျ ဇူလိုငျ မှာ တကွိမျ ဖွဈလာကာ…. မုတျသုနျ‌ရငှေေ့ ထုတျလုပျ မှုကို အလှနျ့ အလှနျ မြားစပေါတယျ …. သမရိုးကြ သတိပေးခကျြက ဧရာဝတီ မွဈရကေို ကွကျတူရှေး ရသေောကျဆငျးပွီဆိုတော့ ….
မွဈရဲ့ Down stream ရဝေငျရပျမှာရှိတဲ့ ပွညျသူမြားအနနေဲ့ အထူးသတိပွုပွီး လုပျဆောငျသငျ့သညျမြား ကွိုတငျ ပွငျဆငျသငျ့ပါပွီ…။ ကွကျတူရှေးရသေောကျ ဆငျးတယျဆိုတာ မွနျမာပွညျ ရဲ့ ဒုတိယ မွဈကဉျြး ရှကေူနဲ့ ကသာကွား မှာရှိတဲ့….
ကွကျတူရှေးနှုတျသီးပုံစံ ကြောကျအစှနျးကိုကွညျ့ပွီး ဒသေခံတှေ မွဈရအေတကျကြ ခနျ့မှနျးကွတဲ့နရောပါ။
ဇူလိုင် ( ၂၅ ) ရက်နေ့ အတွက် မိုးလေ၀သ ခန့်မှန်းချက် ( မိုးဇလ )